KULUNGILE Ukwenza Izipikili Ngenkathi Ukhulelwe? - Izindaba - Shanghai HUIZI digital
Ama-Gel Strips aphulukiswe kancane
Izitika zeTattoo / Eye
Inqubomgomo yokubuyisa nokushintshanisa
KULUNGILE Ukwenza Izipikili Ngenkathi Ukhulelwe?
Isikhathi: 2021-07-13 Ukushaya: 32
Kulezi zinsuku, abesifazane bayathandeka. Ngaphezu kokunaka ukwakheka kanye nekhanda, bakhathazeka kakhulu ngokunakekelwa kwesikhumba, ubuhle, nokuzicwala. Ubuciko be-Nail busemfashini manje. Ubuciko be-Nail bungaguqula izandla zakho futhi bubenze babukeke kangcono. Vele, abesifazane bangenza ubuciko bezipikili, ngakho-ke bangakwazi yini ukwenza ubuciko be-nail ngemuva kokukhulelwa?
(I-ZB UCHUNGECHUNGE ISITHOMBE SEZIMPENDULO) ZB
Abesifazane abakhulelwe bahlukile kithina. Lapho owesifazane ekhulelwe, kufanele anake kakhulu zonke izici. Ngemuva kwakho konke, inempilo eyengeziwe. Vumela'thola ukuthi abesifazane abakhulelwe bayakwazi yini ukwenza ubuciko bezipikili. Kunconywa abesifazane ukuthi beze bazobona.
Abanye besifazane basenza ubuciko bezipikili ngemuva kokukhulelwa, kepha isibalo sizoncishiswa kakhulu. Ubuciko be-Nail bungenziwa kanye ezinyangeni ezimbalwa ngesikhathi sokukhulelwa, kepha hhayi kaningi kakhulu. Uma ufuna ukuvikela ingane yakho, kunjalo'kungcono ukwenqaba ukwenza imiklamo yobuciko be-nail. Ngoba i-nail polish imvamisa inezithako zamakhemikhali, abesifazane abakhulelwe'Ukuchayeka kulezi zinto kungathinta impilo yombungu, futhi ezimweni ezinzima, kungadala ukukhubazeka kwengane.
Inkomba ye-"Ukuphathwa Kokukhulelwa: Yini Ephephile, Yini Okungavikelekile. "By Lauren. Ama-Wienerhttps: //www.parents.com/pregnancy/my-body/pampering/pregnancy-pampering-whats-safe-whats-not/
Iphuzu eliyinhloko: Musa nje.
Udokotela wesikhumba waseNew York City u-Anne Chapas, MD (Chanel, Essie kanye ne-OPI bakhululeke bobathathu.) Uma sekuyisikhathi sokomisa amadijithi akho, khetha umlandeli ocishiwe isibani se-UV.
Yini okufanele uyenze kwabesifazane abakhulelwe abathanda ubuhle? Kepha abanye omama bomcebo bathanda ubuhle. Owesifazane obucayi kakhulu ufuna ukuba muhle nganoma yisiphi isikhathi. Yize kunganconyiwe ukwenza ubuciko be-nail design, kunezinye izindlela ongakhetha kuzo. Ungathenga izitika zesipikili, ezinganciphisa kakhulu ukulimala kwabesifazane abakhulelwe nezinsana.
Hhayi umbala oqinile ongakhetha kuwo ku-nail salon, kepha futhi abaningi bakhetha ukwakheka abangakwazi ukukwenza .Ukubheka izimo zomuntu ngamunye ezahlukahlukene, kuyalulekwa ukuxhumana nodokotela womndeni wakho.
Bese Ungazinakekela kanjani izinzipho zakho ngesikhathi sokukhulelwa ?
Lapha'unakekela kanjani izinzipho zakho, izandla nezinyawo ngesikhathi sokukhulelwa:
Ukuluma kwe-Nix. Shiya lo mkhuba omubi unomphela (izinzipho zakho kanye nezicubu zakho zizokubonga).
Sika izipikili zibe mfushane. Izinzipho ezinde zibamba yonke into encane, ngakho-ke gqoka eyakho ifushane okwamanje.
Faka ngendlela efanele. Ukuze uthole amathiphu abushelelezi nemibhede yezipikili enempilo, hlela ifayela lakho le-nail ohlangothini olulodwa kuphela, kunokusaha emuva naphambili
Slather ngokugcoba. Sebenzisa ukhilimu ocebile ezandleni zakho, ezinyaweni nakuma-cuticles ngesikhathi sokulala.
Buyisela emuva ama-cuticles. Ukusika ama-cuticles kungamema ukutheleleka, ngakho-ke ubabuyisele emuva esikhundleni salokho.
Letha ama-clippers akho. Nciphisa ubungozi bokutheleleka ngokuletha izinsimbi zakho zezipikili (izigaxa, ifayili) esalon.
Zama ukwelashwa kwe-DIY. Hlanganisa izingxenye ezilinganayo ushukela onsundu namafutha omnqumo, bese ukhetha okuncane bese uhlikihla izinyawo nemilenze yakho.
Gcina izipikili ezifakiwe ze-doc. Vumela udokotela wesikhumba abhekane nalokhu kungcola okubuhlungu, okubuhlungu.
Okulandelayo: Ingabe Izingane Zingaba Nobuciko Be-Nail?
Copyright © 2018-2019 HUIZI amalungelo agodliwe.